Sarobidy habakabaka-fotoana mikoriana miaraka amin'ny hery mavitrika | Famolavolana Atitany Tikai - Faucets lakozia tsara indrindra 2021 | Faucets efitra fandroana tsara indrindra | WOWOW Faucets
Home / Interior design / Kompleks iray mandeha amin'ny habakabaka mikoriana amin'ny hery mahery vaika | Tikai Interior Design
Kompleks iray mandeha amin'ny habakabaka mikoriana amin'ny hery mahery vaika | Tikai Interior Design
2021 / 05 / 28 FisokajianaInterior design 5970 0
Ny tononkalo sinoa dia momba ny "rima", ary ny teny tsara indrindra dia amin'ny verba. Araka ny fitenenana, "Ny faritra kely indrindra dia maneho ny hevitra lehibe indrindra". Izahay dia mifantoka amin'ny fahalianan'ny "toa mihetsika ary mbola mihetsika" amin'ny andalan-tsoratra, mba hisarihana ny fizotran'ny tononkalo voajanahary miaraka amin'ny dinam-potoana.
Ny fotoana, toy ny habaka, dia refy misy. Mandeha ny fotoana ary manana halalinina ny habaka. Amin'ny alàlan'ny fampidirana tsara ireo singa famolavolana mavitrika, ny fanehoana ny habaka dia omena ny dikan'ny fotoana. Ny habaka dia manana refy fanampiny - ny fahatsapana ny habaka aorian'ny fiovan'ny fotoana.
Avy amin'ny hazavana sy aloka, endrika, endrika ary loko, ny fotoana mavitrika amin'ny fivoarana ara-panahy dia adika ho toy ny hatsaran'ny fiarahan'ny fihetsiketsehana sy ny fahanginana eo amin'ny habaka manerantany. Ny hatsaran-tarehy mavitrika kanto dia tsy vitan'ny hoe manome fahatsiarovana tsy manam-paharoa ny habaka, fa manasongadina ihany koa ny lohahevitra famolavolana an'ity tranga ity, mamela ny fifandanjana eo amin'ny kanto sy ny lanja ara-barotra.
Ho fitaratry ny zavatra iray, ny zavatra dia azo averina amin'ny sain'ny olombelona, ​​dia ny fitadidiana. Izy io koa dia afaka mihetsika, manova, mandamina ary koa mamorona ao an-tsain'ny olombelona, ​​dia ny eritreritra. Ny tena sarin'ny zava-misy sy ny sary an-tsaina ny fahatsiarovana. Rehefa tapaka ny scenario roa, manomboka amin'ny voafetra ka tsy manam-petra, ny habaka ihany koa dia mitondra ny dian-tongotra sy ny tantaram-potoana.
▲ Faritra fifampiraharahana
Misoko mangina ilay sangan'asa, saingy lalina ny dikany. Ny savaranonan'ny sehatra dia andalana fantsom-boribory miloko varahina tsy misy fotony sy miondrika. Ny singa ara-tantara sy maoderina dia rava sy aorina eto, izay misy ny eritreritry ny mpamorona ny estetika atsinanana.
Ny fantsona varahina toy ny akanjo lava dia ampidirina amina lantom-peony metaly, izay sady fanao amin'ny fomba no no mifanohitra amin'ny maoderina. Ny molekiola kristaly mikoriana amin'ny rivotra dia mihetsiketsika amin'ny rivotra, ary ny tsy hita dia manjary hita amin'ny hazavana mitsingevana.
▲ Fametrahana zavakanto Prologue
Ohatra, amin'ny Sinoa taloha, ny sampana mihintsana amin'ny hazo dia maneho orana. Ny loko, ny tsipika, ny bika, ny vatana ary ny feo, ary ny fotoana, toerana, olona, ​​zavatra ary ny toerana ara-panoharana dia mifangaro mifampitady mba hahazoana gadona ara-nofo ary koa ny gadona ara-pientanam-po ho an'ny orientation spatial.
Ny habaka tsirairay dia samy manana ny fihetsem-pony hampitaina, ary koa manana ny tantarany hotantaraina.
Fuqing, miaraka amin'ny tendrombohitra sy ny ranomasina, dia voajanahary amin'ny famoronana ny zavakanto mihetsika sy mangina. Miorina amin'ity tontolo ity ny famolavolana ny tetikasa, ary ny hevitra hoe "fihetsiketsehana" dia ampiasaina hamoronana habaka efatra refy amin'ny tontolon'ny tanàn-dehibe, izay voafetra amin'ny endrika voafetra. Ny tetikasa dia avy any ivelany, ary avy any ivelany mankany, mamorona ny fiainany manokana izay mahazaka ny karazan-toetrandro rehetra.
▲ Kanto ao amin'ny Promenade
Ny kanto ao amin'ny proscenium dia andian-javakanto izay mamorona fahatsapana hatsikana sy tondra-droa amin'ny fifandonana mifanindry. Ity andian-javakanto ity dia mamorona ny faritra vestibule ary mitarika ny mpijery mankany amin'ny toeram-pisakafoanana mba hiala sasatra sy hifanakalo hevitra. Eo ambanin'ny rivo-piainana maizina mampitony, mitaona ny olona hieritreritra fomba vaovao miaraka amin'ny firavaka taloha.
Ny habaka dia lafiny telo, ny fotoana no refy fahaefatra, ny fotoana fivezivezena mankany amin'ny zoro amin'ny maritrano habakabaka. Ny fikororohana ho lasa estetika mahafinaritra, tsy dia henjana, dia mamadika ilay tsipika mihetsika ho dia miafina.
Ny statika sy ny dinamika, ny fiasa ary ny endrika dia avadika tsy misy soritra. Ary ireo miovaova ateraky ny fotoana, ka tsy fantatrao mihitsy hoe amin'ny endrika ahoana no hametrahana ny habaka. Ny hazavana ihany no afaka mihoatra ny fetran'ny habakabaka ary miparitaka amin'ny refin'ny fotoana.
Ny hazavana dia miampita amin'ny teboka, tsipika ary sehatra, ary ireo teboka miparitaka ao amin'ny hazavan'ny kintana dia lasa molekiola mihetsiketsika indrindra. Ny fandaminana sy ny fitambaran'ny loharanom-pahazavana hazavana dia miditra amin'ny fahatsapana ny tsiranoka optique maro, habaka telo-habe, ary avelao ny hazavana sy aloka hanana ny lehibe sy faharoa. Ny fampifangaroana ny varavarankely lehibe sy ny fitaratra ary ny fitaratra misy ny valin-drihana dia mahatonga ny fetra eo anelanelan'ny anatiny sy ivelany tsy manjavozavo sy manaitra.
▲ Varavarankely sy sary-kanto amin'ny gorodona
Ny manadio teny dia ny manadio tsara sy mampifanaraka amin'ny famoronana ny teny tsirairay ampiasaina ao amin'ilay tononkalo. Ary ny fomba fanapahana avy amin'ny nuance eo an-toerana dia azo ampiharina ihany koa amin'ny fananganana ny fanehoana ny habaka. Ny tsanganana marbra nozaraina tamim-pitandremana dia natao ho toy ny index of space, mampifandray ireo làlana mirindra. Ny lamina toy ny loko misy loko ihany koa dia miasa ho toy ny fiafarana voajanahary ho an'ny habaka. Ny bara boribory dia eo afovoany, ary ny faritra fitsaharana dia mizara boribory manodidina azy, mampifandray ny saha manontolo.
▲ Ny sary sokitra loaka volamena
▲ efijery mangarahara
▲ Marbra fanoratana an-tendrombohitra
Ny sary sokitra poakaty volamena eo anelanelan'ny boribory sy ny kianja, ary ny vatolampy marbra amin'ny fomba fanipazana ranomainty. Ny efijery mangarahara, izay manify toy ny volom-borona toy ny lokanga, dia mora ampiasaina nefa mety. Eo ambanin'ny fametrahana ny fahazavana sy ny hazavana eny amin'ny lanitra, ny rafitra loko dia miovaova miaraka amin'ny fahatsapana ny gadona mirary ambany.
Ny pitsopitsony azo tsapain-tanana na tsy azo tsapain-tanana tamin'ny endriny dia miova isaky ny dingana tsirairay. Topi-maso ny fiantsonan'ny taloha sy vaovao, ny fifandonan'ny Sinoa sy ny Tandrefana. Ny faritry ny fivoriana dia natao ho an'ny fisokafana mba hanamafisana ny fahatsapana habaka, ary ny antsasaky ny fizara tsy misy sakana amin'ny sary dia mampiditra faritra maro. Ny fanaingoana dia miavaka arakaraka ny lahasa sy ny filan'ny fiainana manokana.
Tahaka ny tenin'ilay anti-panahin'ny Half Pond nitanisa tao amin'ny “The Words of the Hyatt Regency”: “Ny habetsany mety, ny vaovao ihany. Aza mianjera, aza lavitra loatra. ” Araho ny tanjon'ny famolavolana ny fanapahana ny fahasarotana sy ny fanatsorana. Amin'ny feo malefaka ambany izay mahazaka ny batisan'ny fotoana, ny fikarohana bebe kokoa ny hevitry ny tena manokana dia lasa fototry ny famoronana habakabaka. Amin'ny alàlan'ny fifangaroan'ny fahatsapana, ny fahatsapana ary ny fahatsiarovan-tena amin'ny fitondran-tena, dia mitatra ny tantara ankoatry ny habakabaka. Mamela ny mpijery hiaina refy hafa amin'ny fihetsem-po sy ny fihetsem-po. Toy ny hoe tsy vonona hipoitra ety ivelany ny fihenjanan'ny tononkalo, dia miafina ao amin'ny farany ambany amin'ilay tononkalo.
Ny fihetseham-po amin'ny habaka dia tena izy, tsy omena, fa avy amin'ny fisian'ny fahatsapana lalina.
Anaran'ny tetikasa: Ivotoerana Marketing Monument Central
Adiresin'ny tetik'asa: Fitsangatsanganana amin'ny lalana Futong sy ny lalana Qinghong, tanànan'i Fuqing
Faritra famolavolana: 1000 metatra toradroa
Fotoana famolavolana: septambra 2020
Fotoana famaranana: Febroary 2021
Tompon'ny tetikasa: Faritra Jinhui Group South China
Tale iray: Peng Gang, Lin Xiule, Jia Dawei, Liu Huan, Lin Jincheng
Famolavolana fanaka sarotra: Shenzhen Dikai Interior Design Co.
Ekipa mpamorona: Xu Shuren, Nie Qingqing, Zhuang Xianggao, Li Jinnian, Chen Chaoqun
Famolavolana fanaka malefaka: Matrix Vertical Design Co.
Mpakasary sary amin'ny tetikasa: Yan Ming
Previous :: Marbra + Wood Grille, manamboatra ny hatsaran'ny gadona | Zero Square Design Next: 120㎡Ny habaka maoderina, fonenana mampitony eo ambanin'ny fiainana avo lenta | Hongfu Gauge Design